Nyere Ndi N’agha Mgbasa Ahia | Martech Zone
Oge izizi m zutere Akara Schaefer, M na-ekele ozugbo maka ahụmahụ ya na nghọta miri emi. Mark na ụlọ ọrụ ndị isi na - arụ ọrụ maka otu esi emeziwanye ahịa ha. Ọ bụ ezie na m bụ ọkachamara na ụlọ ọrụ a, m na-elegara ndị isi ole na ole anya maka ọhụụ - Mark bụ otu n'ime ndị isi ahụ m na-ege ntị. Ezie na Mark bu onye gogoro ndorondoro ahia nke ahia, enwere m obi uto na o wuru isi-nke mbu ya na mgbasa ozi mgbasaozi
Enwere m Mark na m Martech Zone Ajụjụ ọnụ Podcast, zutere ya n'otu ihe omume, ọbụbụenyi mụbara. Ọ bụ ezigbo enyi ịnwe, na-enweghị mgbagha na usoro ya iji mee ka ị nụrụ ihe ị chọrọ. Anyị rụkọtara ọrụ na Dell Luminaries pọdkastị ebe Mark na Dell's B2B Influencer Marketing & Content Creation onye ndu, Konstanze Alex, hụrụ ohere iji gosipụta onyinye ịtụnanya dị na Dell Technologies nwere n'okpuru akara ha. Enwetụbeghị m usoro ntanetị dị ka nke a na Mark kpaliri m iji nyere aka nyocha na ịmepụta ihe ngosi dị ịtụnanya. Agaghị m akwụghachi ya ụgwọ maka itinye m ohere!
Ya mere, chee ihe ijuanya m mgbe m natara ngwugwu na mail si Ngwọta Schaefer Marketing. N’igbe ahụ bụ windo n’ime ihe dị na ya, a Ahịa ahịa akara.
M meghere igbe na n'ime bụ a kemmasi kit, nke pụtara, ihe na-agbasaghị trinkets ma ọ bụ clues:
Ọ bụrụ na i leruo anya nke ọma, a na-eji aka akara aka etinye ihe ọ bụla na nọmba peeji:
Aka Ncha - Peeji nke 9
A Westworld Free Drink Token - Peeji nke 199
Glossier Skin Salve - Peeji nke 232
Egwuregwu jupụtara - Peeji nke 232
Ugbu a, enwere m mmasị na ịtụgharịrị na ndepụta ahụ, nkọwa okwu ahụ, na ibe ndị a kpọrọ aha. Ma, ka m na-emeghe akwụkwọ a, ahụrụ m ọmarịcha akwụkwọ a, nke ejiri aka m debanye aha ya na Mark:
Nakwa, enwere kaadị nwere ihe ndekọ onwe gị na ihe mmado ahịa Rebel maka laptọọpụ m.
Ingenious… Mark kpam kpam m sucked na!
Ma ihe Mak rụzuru site n'ime nke a bụ n'onwe ya ihe mmụta. Ana m ekerịta akwụkwọ Mark na gị, mana ọ malitere nnabata nke kpaliri m.
Gịnị Mere Akwụkwọ A Ji Dị Oké Mkpa?
A ọhụrụ ahịa m jụrụ m banyere a atụmatụ ha na-etinye. Ndị ahịa ha ga-amata atụmanya, nweta adreesị email ha site na ndị ọzọ, ma mezie usoro ozi ịntanetị ha. Ha gwara m na ha na-echegbu onwe ha maka etu esi akwụ ụgwọ dị ala yana nnapụta ha niile. Agwara m ha na ha kwesịrị… na ha kwesịrị ịkwụsị adịgboroja ụlọ ọrụ ndị a. Ha nọ na-eme ka olileanya dị iche iche ghara ịdị na-agụ ha agụụ, ọ dịghị amasị ha.
Na ngosipụta nke Mark, nke a bụ Iwu # 1:
Kwụsị Ime Ihe Ndị Ahịa Kpọrọ Asị.
Ihe ngosi maka ahia mmadu
Anyị na-arụ ọrụ site na usoro mgbanwe dị iche iche ugbu a n'ime ụlọ ọrụ ahụ, nke a na-ewukwasị ha niile na ntọala nke iwulite ntụkwasị obi na iji nweta ekele ha meberelarị ndị ahịa ha. Anyị na-akpụ akpụ ụlọ ọrụ na- mmadụ.
Naanị m na-agafe agafe Nnupụisi ahịa, ma na-agwa ya okwu, aghọtara m ugbu a ihe kpatara o ji nwee nnukwu mmụọ maka mkpa akwụkwọ a. Nnyocha, nghọta, na ọmụmụ ihe ọmụmụ ga-eme ka ntọala nke ihe mmụta ọ bụla a gbanwere n'ime iri afọ ole na ole gara aga.
Ọ bụ nnupụisi dị ezigbo mkpa na post a bụ m na-ebuli ọkọlọtọ ma na-enyere aka ịme mgbanwe ahụ.
Ihe nnupụisi ahịa ga-akụziri gị
Kedu otu usoro ahịa ndị ahịa jiri bụrụ ihe a na-ahụ anya nke mgbanwe nke malitere 100 afọ gara aga.
Kedu ihe kpatara azụmahịa ga-eji wulite na ọrụ azụmaahịa sitere na ahịa karịa mgbasa ozi ọdịnala.
Eziokwu mmadụ ise na-agbanwe agbanwe na isi azụmaahịa azụmaahịa na-aga nke ọma.
Kedu ihe kpatara iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa na ahịa ndị ahịa ji na-anwụ na ihe ị kwesịrị ime banyere ya ugbu a.
Etu ị ga - esi nyere ndị ahịa gị kachasị mma ịzụ ahịa maka gị.
Nzọụkwụ nwere ike ịnye mgbazi ozugbo maka azụmaahịa ọ bụla.
Enwere m ekele na ị ga-akpọ Mark enyi ma kwado gị ka ị bulie akwụkwọ a ozugbo. You'll ga-enwe ike inwe mmetụta dị egwu ma dịkwa egwu na mbọ ahịa gị.
Gụkwuo banyere Nnupụisi Ahịa
Tags: Akara Schaefernnupụisi ahịa
Edị E-Azụmahịa Ejiri Ezo I Kwesịrị ptbụ